TRUESTORY: July 2014
လားလို့ မေးပါတယ်။ သူ့ဘက်ကလည်း ကြိုသတိပေးဖို့ မေ့နေလို့ဖြစ်ကြောင်း၊
အပြစ်မရှိဟု မီဒီယာအချို့အော်နေသော်လည်း လိပ်ပြာမလုံကာ ထွက်ပြေးသွားသည့် သိက္ခာမဲ့ မီဒီယာသမား Bi မွန်းတည့်နေဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူလင်မယားနှင့် မိတ်ဆွေတို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထပ်မံဖမ်းဆီး
Bi မွန်းတည့်နေဂျာနယ်မှ ဂျာနယ်တိုက်ပိုင်ရှင် လင်မယားနှင့် မိတ်ဆွေတို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင်
ထပ်မံ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါဂျာနယ်မှ
ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က Bi မွန်းတည့်နေ ဂျာနယ် တိုက်ပိုင်ရှင် ဦးကျော်မင်းခိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါက်တာ အိအိစံတို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့ရှိ ၄င်းတို့၏မိတ်ဆွေ ဦးယဉ်မင်းထွန်း၏ နေအိမ် သို့ ရောက် ရှိနေကြစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုသိန်းမင်းအောင်
Posted by TRUE STORY at 8:01 AM No comments:
သတင်းထောက်ဆိုပြီး သူတို့ကိုယ်ကို " သူများနဲ့ မတူ ခြားနားသော အဆင့်အတန်း မြင့်မားလှစွာသော VIPအတန်း" သွင်းပြီး အခွင့်ထူးခံ နားထင် သွေး ရောက်နေ
ကမ္ဘာ့ သြဇာအရှိဆုံး အယောက် ၁၀၀ စာရင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ ထပ်မံရွေးချယ်ခံရ
Time မဂ္ဂဇင်းမှ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြေ ညာပေးသော ကမ္ဘာ့သြဇာ အရှိဆုံး အယောက် (၁၀၀)တွင် ယမန်နှစ် က မြန်မာနိုင်ငံမှ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ပါဝင်ခဲ့ သည်။သို့သော် နောက်ဆုံးစာရင်းပိတ်မဲ စာရင်း များ အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ လုံးဝ ပါဝင်ခြင်း မရှိတော့ ဘဲ ထုတ်ပယ်ခံ လိုက်ရကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကတော့ ယခုအချိန်ထိ ကမ္ဘာ့သြဇာ အရှိဆုံး အယောက် (၁၀၀) ထဲတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
Posted by TRUE STORY at 8:43 AM No comments:
မြန်မာ မီဒီယာများအပေါ် ပြည်သူတို့၏ အမြင်များ (လူထုအသံစစ်စစ်)
နှစ်ခြိုက် လိုက်နာကျင့်ကြသုံးတဲ့ 
ထောက်ပြနေတဲ့…
ဗိုလ်ချုပ်သေဆုံးသည့်နေ့ ပျော်ရွှင်ကြသူများ ဓါတ်ပုံ ၈ပုံ
Saturday, July 19, 2014 Myanmar Express Group 11 comments
မျက်ရည်သွန်လို့ ဘဝင်ငြိုး ဇူလိုင် တစ်ဆယ့်ကိုး လို့ ဘယ်သူပြောတာလဲ?
ဥသြောဆွဲလို့ ငိုတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
အမေစုနဲ့ NLD ကို ဆန့်ကျင်ကြတာလား?
သင်ဟာ သရဲတွေတကယ်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်သူဆိုရင် သင်တစ်ဦးထဲသာ ယုံကြည်သူမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လူထု အမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းသော အမေရိကန်လူမျိုးများက သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယုံအကြည်ရှိကြပြီး လူဦးရေရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံကတော့ သရဲတကယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာမအနှ့ံလူသောင်းပေါင်းများစွာက မိမိတို့ ဝါသနာအရ သရဲကို တက်တက်ကြွကြွ လိုက်လံရှာဖွေကြပါတယ်။ Doubtful Newsblog မှ သုတေသန ပညာရှင် Sharon
အာဇာနည်နေ့တွင် အာ ဇာနည်ကုန်း အလေးပြုသောနေ ရာ၌
ကြက်ခြေနီအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်သော ဝေဠုကျော်နှင့်
မီဒီယာသမားတစ်ဦးတို့ က တောက်ကဆဖြစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းအ နေဖြင့်
လာရောက်ဂါရ၀ပြုသူများ အဆင်ပြေစေရေးကိုသာ ဦးစား
အာဇာနည်ကုန်းပေါ်တွင် ဒီဗီဘီသတင်းဌာနမှ သတင်း ထောက်
တစ်ဦးကို အလေးပြုပြီး ပြန်ဆင်းရန် ပြောရာမှ ကတောက်
ကဆဖြစ်ပြီး သတင်းထောက် ကတ်ပြခိုင်းခဲ့ရာ သတင်းထောက်
က မကျေနပ်သဖြင့် လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည့်အ ကြောင်းအရာကို
ထိုသို့ရေးခြင်းနှင့်ပတ်သက် ၍ ဝေဠုကျော်က လာရောက်ဂါရ
Posted by TRUE STORY at 8:04 AM No comments:
“ ကျေးရွာတွေကို ၀င်ပြီး ရိက္ခာတောင်းတယ်၊ ဆက်ကြေးကောက်တယ်၊ ပြီးတော့ လူသစ် အတင်း
Posted by TRUE STORY at 12:56 PM No comments:
မဖြူဖြူမင်း ရဲ့ ယောက်ျား နာမည်က ….မင်းသူရဇော် (ခ) နိူမိုဟာမက် ဖြစ်ပါတယ် …
မင်းသူရဇော်ဟာ သူ့ အဒေါ် ဒေါ်ခင်မာလွင် နဲ့အတူ …မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့ဖမ်းခံနေရရာက...
Posted by TRUE STORY at 12:53 PM No comments:
စစ်တွေ၊ ဇူလိုင် ၁၉- ရခိုင်ပြည်နယ် သို့ ရောက်ရှိနေသော ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင် ရာ အထူး အစီအရင်ခံစာတင်သွင်းသူ မစ္စယန်ဟီးလီ (Ms. Yang He Lee) အားရိုဟင်ဂျာဟူသောအသုံးအနူန်း နှင့်ပတ်သက်ကာ ယူအင်န် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း အားဆက် လက်မသုံးစွဲရန်အထူး တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအစိုးရအဖွဲ့နှင့်တွေ့ ဆုံသည့်အစည်းအဝေးတွင် ရခိုင်ပြည် နယ် ဝန်ကြီးချုပ်
Posted by TRUE STORY at 12:49 PM No comments:
NLD ပါတီ သုတေသနဌာန အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား
Posted by TRUE STORY at 12:46 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 12:42 PM No comments:
" ၂၆ ရာခိုင်းနှုန်းပဲကြိုက်ဦး သမ္မတနဲ့အစိုးရဟာ
ကြံ့ခိုင်ရေးဖြစ်လာမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ ။
ဒီအခြေအနေကို လက်မခံနိုင်ကြရင်လည်း ၇၅
ရာခိုင်နှုန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြလို့ပဲ အကြံပေး
ရမှာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် ကိုယ်စား
လှယ်ဆိုသူတွေက လည်း ခေသူတွေမဟုတ် တာ
ဘယ်ကစမ်းမလား ညာကစမ်းမလား ။ ထောင်တွင်း
အတွေ့အကြုံယှဉ်ပြိုင် ပွဲကလွဲရင် ဘာမဆိုထူးချွန်
Posted by TRUE STORY at 8:59 AM No comments:
MH-17 ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ကို ခွဲထွက်ရေး ပြောက်ကျားများက ပစ်ချလိုက်ကြောင်း အထောက် အထား တစ်ရပ်အဖြစ် သူပုန် တပ်များ အပြန်အလှန် ပြော ဆိုနေသည်ကို ကြားဖြတ်ဖမ်း ယူထားသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှစ်ခုကို ယူကရိန်း ထောက်လှမ်းရေးက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယူကရိန်း လုံခြုံရေးဌာန (SBU)က ရုရှားစစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများနှင့် ရုရှားက ထောက်ပံ့ထားသည့် ယူကရိန်း ကော့ဆက် သူပုန်များကြား အပြန်အလှန်
လေယာဉ်ပေါ် လိုက်ပါလာသူ အားလုံး လည်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ မလေးရှားလေ
““OIC အပါအ၀င် ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ထောက်ပံ့ရယူ ထားသည့်သတင်းမီဒီယာများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေဟု အမျိုးသားနိုင်ငံရေး စောင့်ကြည့် အဖွဲ့စွပ်စွဲ””ဆိုသည့် သတင်းအား ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ထုတ်ဝေ ခဲ့ သည့် မြန်မာသံတော်ဆင့် ဂျာနယ်
အတွဲ (၃) အမှတ်(၁၈)၌ ဖော်ပြ ပြီးနောက် ဇူလိုင် ၁၄ ရက်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂ (မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင် ရာသံရုံး)မှ မြန်မာသံတော်ဆင့် သို့ စုံစမ်း မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းတွင် ““OIC အပါအ၀င် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း
များမှ ငွေကြေး အထောက်အပံ့ ရယူ၍ ပြည်တွင်းတွင် လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်နေသည့် သတင်းမီဒီယာ ငါးခုခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့အား ဖော်
ကုလ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စယန်ဟီလီ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့ အခွင့်အရေးအထူး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အသစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ မစ္စယန်ဟီလီ (Yanghee Lee ) ဟာသူရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် မြန် မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညက ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
မစ္စယန်ဟီလီဟာ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ ကနေ ၂၆ ရက်နေ့ 
အထိ ဆယ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့် အရေးအခြေအနေတွေကို စုံစမ်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘာသာလူမျိုးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ပဋိ ပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကြာခင်က အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့နဲ့စစ်ပြေး
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသား လူငယ်တစ်ယောက် ဆီကနေ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ် ကျည်ဆံဖမ်းမိ
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသား လူငယ် တစ်ယောက် ဆီကနေ ခြောက် လုံးပြူးသေ နတ် ကျည်ဆံဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံသား Mr. SIWAPONG HEMARATCHATA ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုBangkok Airways
လေယာဉ်နဲ့ ထွက်ခွာဖို့ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက စောင့်ဆိုင်းနေတုန်း သူ့ရဲ့ကျော ပိုးအိတ်ကို X-Ray စက်နဲ့ စစ်ဆေး တဲ့အခါ အဲဒီအိတ်မှာ ပွိုင့် ၃၈ ခြောက် လုံးပြူး သေနတ်ကျည်ဆံ နှစ်တောင့်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ လေဆိပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆီ
အဆိုပါ ရွာသားများမှာ ကုန်းခါးကျေးရွာနှင့် သဖန်း ပင် ကျေးရွာများ ၌ နေထိုင်သူများဖြစ်ကြပြီး ဇူလိုင် ၁၃ ရက် ည ၉ နာရီမှ ဇူလိုင် ၁၄ ရက် နံနက် ၂ နာရီအထိ ချောင်း အတွင်း ငါးဖမ်းနေစဉ် KIA မှ လာရောက် ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင် သွားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ကုန်းခါးရွာ သား
‘‘လေနီကြမ်းတွေပါ တိုက် တာ။ ညနှစ်နာရီလောက်ကြီး ကောင်းကင်မှာ အနီရောင်တွေပါ မြင်ရတာ။ လူတွေတောင် လေ နောက်ပါပြီး လွင့်သွားတဲ့အထိ ဖြစ်တာ။ အိုးတွေ၊ ခွက်တွေလည်း အကုန်ပင်လယ်ဘက် လွင့်သွား တာ။
အကြောင်းကို သတင်းပေး ပါတယ်။ သတင်းရပြီးတော့ ယင်း လူငယ်ဟာ ဘာမှ မျက်နှာ ထား ပြောင်း လဲခြင်း မရှိပဲ အခြားနေ့တွေမှာ သူ့ အမေကို ပုံမှန် အတိုင်း လုပ်ကျွေး ပြုစု ရှာပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာလို ဒီလောက် သဘောထား ကြီးနိုင် သလဲ ဆိုတာကို သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူက မေးတဲ့ အခါ
အခွန် မဆောင်သူတွေ၊ ထိန်ချန်သူတွေကို ထောင် ဒဏ် ပြစ် ဒဏ်ချမယ်လို့ ပြည်တွင်းအခွန် ဦးစီးဌာနက အကြီးတန်း အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ အရင်ကတော့ အခွန် မဆောင်သူတွေ၊ ထိန်ချန်သူတွေကို ငွေဒဏ်ပဲ ချမှတ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အခွန်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်ရင်တော့ တစ်ခုချင်းစီ ပေးဆောင်ရမယ့် အပြင် အဲဒီအခွန်ရဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်း ထက် မပိုတဲ့ ငွေကိုလည်း ဒဏ်ငွေ ဆောင်ရမယ်။ ခွင့်ပြုထားတဲ့ ကာလမှာ ဝင်ငွေခွန်
ယခုအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းနှင့် ခန္တီးတို့တွင် မိုးများပိုမိုရွာသွန်းနေ သောကြောင့် အပေါ်မြစ်ရိုးဘက် တွင် စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ မရောက်ရှိ သေးသော်လည်း ၄င်းရေများသည် ဟင်္သာတ၊ ဇလွန်၊ ငါးသိုင်းချောင်း မြို့နယ်များသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရွာသွန်းထား သည့် မိုးရေအခံနှင့်ဆိုလျှင် ရေ အနည်းငယ်များလာနိုင်ပြီး လယ်
ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာလောက အတွက် စိတ်အပူကြီးပူ
မိပါသည်။ Unity ဂျာနယ်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သော ဓါတု
လက်နှက်စက်ရုံ ဖြစ်နိုင်သောလည်း ဓါတုလက်နှက်
စက်ရုံဟု ယူဆလောက်သော သက်သေ မပြနိုင်ပဲ
ဓါတုလက်နှက် ဆိုသော အချက်ကို အထူကြီး
ခေါင်းတင်ထားသည်။ သံချည်သံကွေးသမား တစ်ယောက်ကပြောသော ဤစက်ရုံသည်
Posted by TRUE STORY at 2:52 PM No comments:
အဲဒီဆောင်းပါးကြောင့် ၁၉၂၃ခုနှစ် အစိုးရလျို့ဝှက်ချက်များ ဥပဒေ ၃(၁)(က)/၉ အရ
ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ ကျင်းပနေတဲ့ Rio's Maracanã ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ဂျာမနီအသင်းနဲ့အာဂျင်တီးနား အသင်း အသည်းအသန် ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေကြတာကို လူတွေကအာရုံစိုက်နေကြချိန်မှာ ဘောလုံး
ကွင်း အပြင်ဘက်မှာတော့ ဘရာဇီး ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲကို ကန့်ကွက်ဆန့် ကျင်သူတွေက ဆန္ဒပြနေ ကြတာ ရဲတွေက မျက်ရည်ယိုဗုံး သုံးပြီး လူစုခွဲရတဲ့အခြေ အနေထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် စားသောက်စရာတွေထည့်ယူ စားသောက်ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကြီးရဲ့ မာနမရှိပကတိ ရိုးသားတည်ကြည်မှုတွေအပေါ် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာသမ္မတ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊
သဘင် ပညာရှင်များ MPC ၌ တွေ့ဆုံ
ဆန္ဒပြ ခဲ့သောကြောင့် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်
အမှုဖွင့်ခံရခြင်း၏ လက်သည်မှာ 7Day
သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်ချုပ် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဂျာနယ်တိုက်များက သတင်းယူရန် စေလွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်းသတင်းယူခြင်း မပြုဘဲ ဆန္ဒပြရန် ကြိုတင် စီစဉ်
တိုင်းရင်းသားပါတီပေါင်း (၂၀) မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လူထုခေါင်းဆောင်အဖြစ် မသတ်မှတ်ကြောင်း ပြောကြား
ဆန်းစုကြည် လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ကန့်ကွက်တယ်။ လူထုခေါင်းဆောင်ဆို တာမရှိဘူး၊ ပါတီတစ်ခုရဲ့ နာယကတွေ ပါတီရဲ့ခေါင်ေးဆာင်တွေပဲရှိတယ်၊လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ ပြည် သူ သန်း ၆၀ ကိုမေး ကြည့်လေ၊ ဘယ်သူက တညီတညွတ်တည်းထောက်ခံမှာလဲ၊ တကယ်တမ်းက ပါတီခေါင်းဆောင်
ဘန်ကောက်တွင် ကြော် ငြာရိုက်ကူးပြီး ပြန်လာသော
မေ မြတ်နိုးသည် သရဖူသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကိစ္စ များကို အတိတ်မှာထားခဲ့ပြီး ရှေ့ ဆက်မည့် အနုပညာအတွက် ပရိ သတ်များ အားပေးစေလိုကြောင်း မေမြတ်နိုးကပြောသည်။
‘‘ဖြစ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကို နောက်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ ရှေ့ ဆက်ပြီး ဒီထက်မကကြိုးစားသွား မယ့်အတွက် ပရိသတ်တွေက မြတ်နိုးကို ဆက်လက်ပြီး အား ပေးကြ ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်’’ ဟု မေမြတ်နိုးကပြောသည်။
ဘန်ကောက်တွင် ကြော်ငြာ ရိုက်ပြီး ပြန်လာလျှင် သရဖူသိမ်း ခြင်း၊ မသိမ်းခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်
ယူနတီ ကိစ္စမှာ သတင်းထောက်တွေ နိုင်ငံသားပီသရင် ဒီလို မလုပ်သင့်ဟု ဦးလှဆွေဆို
မီဒီယာဆိုပြီးတော့ နာနေဖို့တော့မလိုပါဘူး။ အဲဒီမှာဝါးခုတ် သူတွေ၊ ရေခပ်သူတွေအားလုံးက ဂိတ်အ၀င်အ ထွက်လက်မှတ် လုပ်ပြီးတော့ ၀င်ထွက်နေကြတာပဲ၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ အခုဒီ လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေနဲ့ နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖော်ပြတာတို့ သွားလုပ်တာကိုးဗျ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမှုက သေဒဏ်တောင်ပေးနိုင်
Posted by TRUE STORY at 1:19 PM No comments:
တွေ့မြင်သမျှ အများပြည်သူ မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရ တဲ့ နှလုံးခုံစက် အကူအညီဖြင့် အသက်ရှင်နေ သည့် နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးသမ္မတရဲ့ လုပ်ဆောင် မှု မြင်ကွင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဘူဖေးစားဖို့ရောက် လာသူတွေကို နိုင်ငံတော် သမ္မတလုပ်တဲ့သူက ပန်းကန်ယူပေး ရှာပြီး လူရှင်းချိန်မှ နောက်ကနေ အသာတန်းစီကာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အစားအစာ တချို့ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်ယူခဲ့သည်။
ထိုပွဲတွင် "သူများတွေနဲ့ စကားပြောဖို့သာ မရဲတာ တိုင်းပြည်လိုအပ်တာတွေ ကူညီပေးဖို့ တခြားနိုင် ငံတွေကို တောင်းတဲ့အခါ နှုတ်က ရဲနေပါပြီ..." ဟု စိတ်မကောင်းဖွယ် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ
လွတ်လပ်မှုကို တလွဲအသုံးချကာ ငွေကြေးဦးစားပေးသည့်
၂ဝ၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ ဂျာမနီ ဗိုလ်စွဲ (full highlight)
ဘရာဇီး နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပတဲ့
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ
အာဂျင်တီးနား အသင်းကို ဂျာမနီအသင်းက
၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရပြီး ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါပြီ။
ဂျာမနီအတွင် အနိုင်ဂိုး သွင်းလိုက် အပြီး မြင် ကွင်း၊ ဓာတ်ပုံ-ဖီဖာ
ပထမပိုင်း၊ဒုတိယပိုင်း မိနစ် ၉၀ အတွင်း
Posted by TRUE STORY at 8:16 AM No comments:
‘‘ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ၊ အင်အားကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေကြားမှာနေရတဲ့